Kenya: Nin u taagnaa difaaca & badbaadada duurjoogta oo lagu dilay Nairobi – Kasmo Newspaper
Kenya: Nin u taagnaa difaaca & badbaadada duurjoogta oo lagu dilay Nairobi
Updated - February 6, 2018 8:47 am GMT
London (Kasmo), Nin Maraykan ah oo u ololayn jiray la-dagaallanka boojiska, gaar ahaan maroodiga iyo wiyisha, ayaa lagu dilay dalka Kenya.
Esmond Bradley Martin oo 76 jir ahaa waxaa habeenkii Axadda, 4tii Jenaayo, ugu soo dhacay, aqlkiisii Nairobi oo uu ku noolaa in ka badan 30 sano, nin ku hubaysan toorrey, halkaana ku dilay.
Baaritaanka hordhaca ah ee Boliiska Kenya waxaa lagu sheegay in uu noqon karo fal burcadnimo oo si xun ku dhammaaday, lakiin waxaa kale oo suuragal ah in loo khaarajiyay sababo la xiriira baaritaannadiisii halista lagu hayo duurjoogta dartood.
Sannadadii u dambeeyay xogta Martin ururiyay oo kooxda ‘Save the Elephants’ shaacisay waxaa lagu caddeeyay in dalka Burma isu beddelay udub-dhexaadka suuqa caalamiga ah ee faanta maroodiga, oo xitaa dhaafay dalka China, iyada oo qiimaha 1Kg gaaray $3,000 oo Dollar.
Culayska 2da faan ee maroodiga qaangaarka ah waxaa lagu qiyaasaa 10-15 Kg, taas oo macnaheedu yahay dilka 1kii maroodi in uu ku fadhiyo $30-45,000 oo Dollar; suuq ganacsi oo aan hoos u-dhac lahayn oo Boliiska Caalamiga ah (Interpol) ku qiyaaseen 10 ilaa 20 Bilyan oo Dollar sannadkii.
Xogtii u dambaysay ee CITES (Convention on Trade in Endangered Species) waxaa lagu sheegay in boojisku, sannadkii 2017kii dileen, ugu yaraan, 20,000 oo maroodi, taas oo macnaheedu yahay 100 maroodi maalintiiba.
Tobankii sano ee u dambaysay waxaa la qiyaasaa in tirada maroodiga Afrika hoos u dhacday 30% oo 352 nooc oo qur ah ka soo hartay.
Martin wuxuu noloshiisa oo idil u huray badbaadinta duurjoogtaan, wuxuuna 80meeyadii ilaa maanta u kala gooshi jiray Afrika iyo Asia, isaga oo ah Ergayga Qarammada Midoobay u qaabilsan la-dagaallanka boojiska.
Mamnuucista Caalamiga ah ee ganacsiga faanta maroodiga waxay taagantahay ilaa 1989kii, laakiin muddooyinkii dambe waxaa abuurmay diiwaanno gaar ah oo ay ku qoranyihiin 447 ganacsade oo sifo sharci ah ku iibiya.
Suuqa ugu weyn waa midka Shiinaha oo qiyaastii 111 Tan oo faan maroodi u badan laga heli karo, iyada oo cadaadiskii joogtada ahaa dhowaan mirihii u horreeyay ka dhasheen, markii Xukuumadda Shiinuhu joojisay ganacsiga sharcidarrada ah ee faanta.
Iyo waliba mamnuucista, marka la gaaro sannadka 2021ka, xitaa ganacsiga sharciga ah ee faanta maroodiga, guushaas oo Martin, dagaal dheer ka dib, cimrigiisu ku simi waayay.